သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: မာယာသစ်ပင်
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 6:36 PM
သူတို့ နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက် က ချစ်ခြင်းကို စာလုံးပေါင်း မတတ်ရှာဘူး
အလင်္ကာလေးတွေ မြောက်တယ်ဗျာ. သက်မဲ့ကို သက်ရှိပုံစံဖြစ်အောင် တင်ပြထားတာလေးတွေကလည်း ဩဇဂုဏ်မြောက်ပါတယ်. ဒါနဲ့ မေးစရာရှိတယ်ဗျာ. ဘာကြောင့် မရွေးအသည်းနှလုံးလို့ တင်စားတာလဲ. တရုတ်ကြီးနဲ့တူလို့လား. ဟတ်ဟတ်ဟတ်. ဒါဆိုလည်း အီကြာကွေး အသည်းနှလုံး (ပျော့စိစိနဲ့နေမှာပဲ) အော်ကွေ့ကြည် အသည်းနှလုံး (စားလိုက်မှ အိသွားတာမျိုး) အီကွေး အသည်းနှလုံး (တစ်နှစ်တစ်ခါပဲ ရှားရှားပါးပါး စားရသလို ရှားပါးတဲ့ အချစ်မျိုး)၊ ပလာတာ အသည်းနှလုံး(ထပ်ခါထပ်ခါရိုက်လေ ပိုကောင်းလေဆိုသလိုပဲ များများ ခံစားပြီးမှ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ရရှိနိုင်တဲ့ အချစ်မျိုး) ... ဟတ်ဟတ်ဟတ်. ဘာပဲပြောပြော ရေးထားတာလေးက ကဗျာသိပ်ဆန်တယ်. ခံစားရပါတယ်ဗျာ. Five Stars!!!!!!!!!!!!
အစားထိုးမရတဲ့ အချစ်ကြောင့် အသည်းကွဲနေသူကို ကိုယ့်အသည်းကို အတင်းထိုးပေးခြင်းဟာ အသည်းကွဲသူကို ချစ်ရာရောက်သလား ပိုကြေကွဲ ခံစားရအောင် လုပ်ရာ ရောက်သလားဆိုတာကို စဉ်းစားမိသွားတယ် မလေးရေ
ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်တုန်းမှာ စိတ်ခံစားမှုက သမုဒ္ဒရာထဲ ကရေအေးစီးကြောင်းတွေလို တငြိမ့်ငြိမ့်စီးလိုက်၊ ကမ်းကိုလာပုတ်တဲ့ လှိုင်းတွေလို တဝုန်းဝုန်းရိုက်လိုက် နဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ သယ်ဆောင်မှုတွေနောက်ကို အလဲလဲ အပြိုပြိုပါသွားခဲ့တယ်၊ အဲဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(စကားမစပ်..ကျနော့်ဆီမှာပြောသွားသလို၊ ဝိညာဉ်တွေ နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုတကယ်လိုချင်ရင် သူတို့တွေကို သေချာပေါက်တွေ့နိုင်မယ့် လိပ်စာတွေ ကျနော်သိပါတယ်၊လိုချင်ရင်ပေးပါ့မယ်...။)
သစ်ပင်စိမ်းပေါ်က တို့လို့တန်းလန်း သံမဏိအသည်းနှလုံး၊ ပန်းအသည်းနှလုံး၊ ဖဲအသည်းနှလုံး၊ မှော်အသည်းနှလုံး၊ အတ္တအသည်းနှလုံး၊ မရွေးအသည်းနှလုံး၊ ဖော့အသည်းနှလုံး၊ ပလတ်စတစ်အသည်းနှလုံးတွေထံမှာ ဂီတသံတွေ ကြားနေရသည်။
wow! so many kinds of hearts.
As for me, may be iron heart :P
Cheers! Ma lay, very nice one page story. I love it. :)